MuTatarstan, kukohwewa kwembatata kwakapedzwa zvachose, mahekita 3986 akacherwa, 108 zviuru zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nematatu zvakacherwa, avhareji goho muRepublic yaive 643 c / ha. Iyo yakanakisa mbesa yezvirimwa yakaunganidzwa nevarimi venharaunda yeBaltasinsky - 273 centner / ha.
Unogona kutenga mbatatisi dzakarimwa nevarimi veTatarstan nemutengo unodhura pamitambo yechinyakare yekurima neMugovera. Sekureva kwedhipatimendi rinoshanda re Ministry of Agriculture yeRepublic of Tatarstan, chibage chezviyo chakakohwewa kubva ku10,3 zviuru mahekita (23% kusvika fungidziro), zviuru mazana 57,6 zvitanhatu zvakakohwewa. Sunflower yakakohwewa kubva pa88,7 zviuru mahekita (74% kusvika fungidziro), 149,5 zviuru matani zvakakohwewa.
Matunhu gumi nerimwe ari kuita kukohwa shuga. Agrarians eApastovsky, Zainsky neBugulma maruwa vakapedza kuchera. Pamutsetse wekupedzisira - Tukayevsky, Sarmanovsky, Buinsky neMenzelinsky matunhu.
Kukohwa kwevakabatwa chibharo kunoenderera muRepublic. Parizvino, kukohwa kwevakapambwa kwakapedzwa nevagari vematunhu makumi maviri nemapfumbamwe, zviuru zana nemakumi mashanu nezviuru makumi maviri nezviviri zvakakohwewa. Kuchenesa kunopedzwa neAzenakaevsky, Aksubaevsky, Bavlinsky, Drozhzhanovsky, Rybno-Slobodsky, Tukayevsky maruwa.
Rimwe basa remwaka rinoenderera mudunhu reRepublic. Kunyanya, kurimwa kwevhu kwakaitwa munzvimbo inosvika 1653,7 zviuru mahekita, inova 92% yekufungidzira, kusanganisira nekudzika kwenzvimbo yekurima - 838 zviuru mahekita.
Source: Ministry of Agriculture uye Chikafu cheRepublic of Tatarstan
Tags: Republic of Tatarstankukohwa mbatatisi